शान्ता बोल्दा भावुक दर्शक !
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ केशर रोका
बुवाले खाली खुट्टा जमिन्दारको छोरीचेलीको भारी बोकेर प्यूठानको चकचके, विजुवार र उदयपुरकोटमा आएको विगत सुनाउँदा उनी आफै भावुक थिइन् ।
प्रेरणादायी त्यो मन्तव्य
प्यूठान : मेला महोत्सवमा कलाकारले प्रत्यक्ष गाएको गीत सुन्नकै लागि दर्शकहरु पुग्ने गर्छन् । बीचैमा आयोजकले नेताहरुलाई बोलाएर भाषण गर्न लगाएपछि दर्शकहरु तितरवितर हुन्छन् । तर पाँच दिनदेखि जारी स्वर्गद्धारी चौथो प्यूठान महोत्सवमा दर्शकहरु त्यसो गरेनन् । दाङकी प्रतिनिधीसभा सदस्य शान्ता चौधरीलाई कार्यक्रम प्रस्तोताले शुभकामना मन्तव्य राख्न बोलाए । गीत सुन्न आएका दर्शकहरु नेताहरुको भाषण कति सुन्नु भनेर उठ्न थालेजस्तो गरे । तर शान्ताको भाषण सुन्दै जाँदा दर्शकहरु डग्मगाएनन् । उनले शुरुमै आफ्नो प्यूठानसँग आफ्ना बुवाको सम्वन्ध रहेको सुनाईन् । उनका बुवाले प्यूठानको उदयपुरकोट र चकचकेको बारेमा आफूलाई बताइरहने गरेको उनले स्मरण गरिन् ।
जव उनले बाल्यकालमा आफूले भोगेको कमलहरी पीडा सुनाउँदै गइन्, त्यसपछि दर्शकहरुले उनको भाषण निकै चासोका साथ सुने । टाढाटाढा बसेका दर्शकहरु उनको मन्तव्य सुन्न नजिक आएको देखिन्थ्यो । चौधरीको त्यो मन्तव्य नेताले बोलिरहने झुट्टा आश्वासनजस्तो थिएन् । उनले दर्शकहरुलाई प्रेरणा बाढिरहेकी हुन्थिन् । कमलहरी जीवनमा आफूले पाएको पीडा, पढ्न नपाएको दुःखेसो र संघर्षले दिलाएको सफलताका बारेमा उनले निकै सरल र मिठासपूर्ण शव्दमा व्यक्त गरिन् । महोत्सवमा आएका दर्शकहरुलाई उनको झण्डै आधा घण्टाको त्यो मन्तव्य प्रेरणादायी बन्यो ।
आठ वर्षको उमेरदेखि जमिनदारीको घरमा दासी जीवन विताएको संघर्ष पोख्दा धेरै दर्शकको आँखा रसाए । उनले १८ वर्ष कमलहरी पीडा भोगेको सुनाईन् । त्यो बेलाको संस्कारलाई उनले दोष दिइनन् । तर अझैपनि उ बेलाको सोँचबाट परिवर्तन हुनभने महिला दिदिवहिनीहरुलाई सन्देश छाडिन् । ‘महिलाहरु सँधै पछाडी पर्नुपर्छ भन्ने छैन्’,उनले भनिन्,‘संघर्षले नै हो मेरो जीवन फेरिएको ।’
उनी ०६३ सालमा कमलरी प्रथाबाट मुक्त भइन् । ०६४ सालमा संविधानसभामा प्रवेश गरिन् । ‘संविधानसभामा छिर्दा आफ्नै नाम शान्ता राम्रोसँग लेख्न जान्दैन्थे’,विगत सम्झदै दर्शकलाई उनले भनिन्,‘अहिले एसइइ पनि पास गरे । कानुन विषय पढ्दै छु । संघर्ष गरे असम्भ भन्ने केही रहेन्छ ।’ कानुन बनाउने ठाउँमा आफू भएको बताउँदै उनले पीछडिएका महिलाहरुको मूक्तीका लागि आवाज उठाइरहने बताईन् । इच्छा शक्ति भएपछि अप्ठ्यारो देखिने सवै कुरा सहज बन्दै जाने उनको विगतको अनुभवले सिकाएको छ । मेला महोत्सवलाई रमाइलोमा मात्र सिमित नराखी ज्ञानका कुरा बाढ्नलाई पनि उपयोग गर्न उनले आयोजकलाई सुझाव दिइन् । राजनीति क्षेत्रमा समेत आफूले धेरै छलाङ मारेको उनले सुनाईन् । दाङ निवासी चौधरी हाल नेकपाकी केन्द्रिय सदस्य र नेकप सचेतक समेत हुन् ।
पीडा र सफलता सुनाउँदा महिला दिदिवहिनीहरुलाई हौसला थपिने आशाले आफ्नो विगत कोट्टाएको उनको भनाई छ । बुवाले खाली खुट्टा जमिन्दारको छोरीचेलीको भारी बोकेर प्यूठानको चकचके, विजुवार र उदयपुरकोटमा आएको विगत सुनाउँदा उनी आफ्ै भावुक थिइन् । ‘मेरो बुवाले भारी बोकेर पैतलामा ठेला उठाएको ठाउँ आउँदा हर्षका आँशु झरेका छन्’,उनले भनिन्,‘जीवन परिवर्तन भएपनि विगत भुलिँदो रहेन्छ ।’ उनले महोत्सवमा आउने जनप्रतिनिधीहरुलाई आफूले बोलेका बाँचा पुरा गरे नगरेको बारे प्रश्न गर्न समेत दर्शकहरुलाई सुझाव दिइन् । ८ गतेदेखि जारी महोत्सव १८ गतेसम्म चल्ने छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६, ०७:३५:५९
मृत्युसँग लडिरहेछिन् दुर्गा, बचाउँने अभियानमा प्रमोद ! शनिवार, आश्विन ३, २०७७ 63